बाबु बोगटीको प्रेम होटल साहुनीसँग ? (भिडियो) « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
बाबु बोगटीको प्रेम होटल साहुनीसँग ? (भिडियो)
मंसिर पाँचमा रिलिज हुने नेपाली चलचित्र ‘हमजाएगा’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । मंगलबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै २ मिनेट लामो ट्रेलर देखाईएको हो । ट्रेलरमा ड्राईभर र राजमार्गको होटल साहुनीको प्रेम देख्न सकिन्छ ।